Miara-miasa ny Meedan sy ny Lingua mba handika ny RightsCon ho amin’ny teny Espaniola sy Arabo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jolay 2019 9:14 GMT
Fihaonambe lehibe manerantany natokana momba ny ho avin'ny aterineto ny RightsCon. Hahita RightsCon lehibe kokoa, maranitra kokoa sy tsara indrindra kokoa, ary mavitrika kokoa sy miompana bebe kokoa amin'ny vokatra noho ny teo aloha ny amin'ity taona ity. Mamolavola ny resadresaka manerantany eo amin'ireo manam-pahaizana momba ny zon'olombelona, ​​ireo mpitarika orinasa, ireo mpikirakira teknolojia, ny solontenam-panjakana, ireo mpampiasa vola ary ireo mpanandrateny ny fihaonambe
Mandray anjara mavitrika amin'ny RightsCon eo amin'ny resaka fanadihadiana, fizarana ary fananganana tambajotra eo anivon'ireo mpanatrika ny Twitter. Saingy amin'ny valan-dresaka iraisam-pirenena tahaka izany, dia ny fiteny indraindray no mety ho sakana amin'ny fandraisana anjara. Miara-miasa amin'ny Meedan sy Access Now ankehitriny ny Lingua Global Voices mba handika ireo sioka amin'ny teny Anglisy navoakan'ireo mpandahateny sy mpandray anjara amin'ny teny Arabo sy Espaniola.
Araho ny dikanteninay ary tohano ny ezaka:
Araho, avereno ary zarao. Araho ny kaonty roa natsangana ho an'ny fihaonambe ao amin'ny @RightsCon3rabi sy @RightsCon2Es
Mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny maha mpandika teny. Manana fahaizana mandika teny ve? Te-handray anjara? Mifandraisa amin'ny hello@speakbridge.io
Mientanentana izahay amin'ny fahafahana manao ny sasany amin'ireo fifanakalozan-kevitra amin'ity fihaonam-be lehibe ity ho hita sy azo idiran'ireo izay manaraka ny aterineto Arabo sy Espaniola.